Ego ole ka obodo gị dị? - Geofumadas
Septemba, 2018 cadastre, Geospatial - GIS, Land Management
A sara mbara nke ukwuu nke nwere ike ịkpalite ọtụtụ nzaghachi, ọtụtụ n'ime ha ọbụna mmetụta uche; ọtụtụ mgbanwe dị ma ọ bụ ala nwere ma ọ bụ na-enweghị ụlọ, akụrụngwa ma ọ bụ ebe a na-ahụkarị. Na enwere peeji ebe anyị nwere ike ịmata uru nke ala ahụ n'otu mpaghara obodo anyị, ọ ga-abụ nnukwu enyemaka maka akụkụ ndị metụtara cadastre, ahịa ụlọ ma ọ bụ atụmatụ iji ala.
Ruo ugbu a, m na-masịrị m n'uche nke «Map nke Ụkpụrụ Ugwu na Latin America«, Nke na-achọ nzube a, n'okpuru usoro mmekọrịta na itinye teknụzụ webmapping n'ọrụ. O yikarịrị ka ọ ga-emesị bụrụ akara aka na ọnọdụ Latin America, ọ dịkarịa ala na obodo ndị ka mkpa, karịchaa n'ihi ụzọ nha anya n'etiti mpaghara na mba.
Imekorita oru ohuru
Na mbipụta 2018 ya, ọ na-eweta mmelite nke ihe ọ malitere na afọ abụọ gara aga: nhazi usoro ụkpụrụ nke obodo ndị mepere emepe nke obodo dị iche iche Latin America na ahịa dị mkpa maka idozi. Ihe dị iche, na eziokwu ahụ nwere ike iweta mpako ma ọ bụ mmasị, bụ na ọ bụ mmekorita na nnwere onwe zuru oke. Soro ụdị ọrụ nke ndị ọrụ afọ ofufo na-enye otu nke na-enyere aka mezue ihe mgbagwoju anya ndị a na-eyikarị mgbe ụfọdụ mpaghara mpaghara akụ na ụba nke mba anyị. A na-emeghe oghere ahụ maka ndị mmadụ na ndị ọkachamara, ndị ọkachamara, ndị na-ere ihe onwunwe na ndị ọrụ gọọmentị, yana ụlọ ọrụ ọha na eze na-ejikọta na njikwa nke iwu obodo. Ọ bụ n'efu ma nweere onwe ya pụọ ​​n'ụdị akụ na ụba ma ọ bụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke nwere ike itinye nrụgide n'ahụ ndị na-ahazi ma ọ bụ ọnọdụ ha mgbe ị na-etinye ego ụfọdụ.
Ọrụ a dị mkpa na mbipụta abụọ gara aga, otu na 2016 na onye ọzọ na 2017. Ekele maka ọrụ ndị a, nchịkọta data 7,800 nke ederede site na 16 mba dị iche na mpaghara ahụ.
Ọ dị mkpa ịmara uru nke ala obodo ukwu
N'ịbụ ndị nwere ihe ọhụrụ a, ajụjụ na-ebute ihe kpatara ya ji dị mkpa ma ọ bụ nke ga-aba uru ịmara ókè ala na mpaghara ụfọdụ. Ịdị adị nke ụlọ akụ ihe ọmụma banyere isiokwu a nwere ike inyere aka ịtọ ntọala mgbe ị na-eme atụmatụ atumatu ọha na eze ma gbasaa atụmatụ nlekọta mpaghara maka obodo kachasị mkpa n'ógbè ahụ. Otu atụmatụ atụmatụ ime obodo, dị ka otu ụlọ obibi mmadụ, ga-enwe mmetụ ka ukwuu ma ọ bụrụ na e mere ya n'ọtụtụ mba n'okpuru iwu ndị doro anya; Ikwughi oru ndi n'ejuputa ihe ndi ozo, ndi ezi omume na ugwo.
Otu n'ime ihe ndị na-enye obi ụtọ nke ọrụ a bụ ikekwe na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ na-emepụta data maka n'efu na Intanet.
Anyị anụwo ọtụtụ ihe crowdfunding dị ka otu ụzọ isi zụlite ma ọ bụ tinye ego na oru ngo ka o wee nwee ike ịrụ ya. Ha bụ ndị mmadụ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke na-etinye ego ahụ ka onye ọzọ wee nwee ike ịnọgide na-enwe ihe mgbaru ọsọ ha, iji ohere nke weebụ. Na crowdsourcing a na-emekarị usoro nhata, naanị ihe dị iche na-enye abụghị ego ma ọ bụ data ma ọ bụ ihe ọmụma, nke na-agbanwekwa ihe ahụ nke mere ka ihe ọmụma ahụ dị n'otu akụkụ nke ọrụ ahụ. A pụrụ ịghọta nsụgharị ahụ dị ka "mmekorita ọnụ". Ọ bụ, n'ụzọ dị mma, otu oke, mgbe nile, n'efu, imeghe na nke dị mfe ịnweta òkè, na ilekwasị anya na geolocation ejirila okwu ahụ mee ihe ịba ụba.
Ugboro anọ a pụrụ inye maka ngwá ọrụ a
A na-enye ọrụ mbụ n'ime ihe gbasara agụmakwụkwọ. Enwere ike iji ya mee ihe dị ka eziokwu dị oke ziri ezi na nke ziri ezi mgbe ị na-edepụta ọnụ ọgụgụ ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịnweta ụlọ nwere ike bụrụ otu ihe a ga-atụle mgbe ị na-atụle ọkwa ndụ nke onye ọ bụla; ọ bụrụ na anyị enwere mpaghara dị n'otu nke dị n'elu, anyị nwere ike iji ụkpụrụ nke ibi n'etiti ndị bi na Buenos Aires dị iche iche tụnyere obodo ndị ọzọ dị na Argentina, ịkpọ aha.
Mpaghara ọzọ nke enwere ike iji maahia bara uru bu maka cadastre gbasara ego. Kwa afọ gọọmentị ime obodo na-achọkarị data ahịa iji melite ụkpụrụ nke mpaghara geo-aku na uba, nke a ga-eji emelite ọnụahịa ahụ wee tụkọta ụtụ. Ọtụtụ mgbe nke a na-achọ ịlele ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ ụlọ, azụmaahịa a pụrụ ịdabere na ya na Njirimara Njirimara, ọkwa ire na mgbasa ozi, wdg. Ọfọn nke a bụ ezigbo ụzọ kwesịrị ekwesị maka nke a; Ọ gaghị abụ ihe ijuanya na ndị ọrụ ime obodo na-ata ahụhụ na mbipụta a na-emelite data ha ebe a ka ịghara ịhapụ ihe ndị ọzọ na-eme iji kwado nyocha ha. Aghaghị m ịkọwapụta na ụkpụrụ ndị a bụ ụkpụrụ ahịa ma na-ezo aka na ala ahụ, ha anaghị etinye uru nke ụlọ ahụ.
Zọ nke atọ jikọtara ya na nke gara aga, mana n'okpuru usoro ije ahịa; karịsịa n'ihi na naanị site na ile anya na map ọ ga-ekwe omume ikpebi na mpaghara nke obodo ahụ ihe onwunwe na-akwagharị kachasị; Maka mma ma ọ bụ ka njọ, ozi a nwere ike ịba uru ọbụlagodi ịkwalite itinye ego na ego ma ọ bụ chọpụta ozi ekwupụtaghị. Enwere ike ibudata ntọala ihe ọmụma ahụ, data ahụ gụnyere nkọwa nwere ike iji mee ihe maka ebumnuche ndị ọzọ, dị ka ọtụtụ mpaghara nza, ọrụ ndị dịnụ, isi iyi nke data na onye ọrụ nyere ya.
N'ikpeazụ, ma eleghị anya na ọkwa dịkwuo mfe, ụdị ngwá ọrụ a na-aga n'ihu na nkwụsị ihe mgbochi. Ọ bụ ezie na Ijikọ ụwa ọnụ, agbamume site n'Ịntanet na ụdị nkwurịta okwu ọhụrụ, kwadoro n'ụzọ dị ukwuu, ọrụ ndị dị ka Map nke ụkpụrụ nke ala Latin America jikọrọ aka na-eme ka njikọ dị n'etiti ndị si mba dị iche iche dị n'otu site n'ịdọ aka ná ntị nkịtị .
Imezu oru ngo a nwere uru ya na atumatu nke Lincoln Institute of Land Policy nke na-achọ ime ka ọnụ ọgụgụ ya na ọnụnọ ya dịrị na Latin America na Caribbean site na ịkwalite mmemme agụmakwụkwọ na sayensi na ụdị ọrụ mgbasa ozi dị iche iche.
Hụ ihu na ibe map
Previous Post«Previous Wms2Cad - ijikọ ọrụ wms yana mmemme CAD
Next Post Ihe ngwanrọ kacha ewu ewu - onyinye ntanye kọmpụta 2018Next »